भिडियो | नेपाल आज
रमेश खरेलको दाबीः आईजीपी मै बन्छु, कसैले रोक्न सक्दैन (भिडियाे)
काठमाडौं । अबको प्रहरी आईजीपी को बन्ला ? भन्ने विषयले यतिबेला चर्चा पाएको छ । बरिष्ठताको आधारमा सर्वेन्द्र खनाल, रमेश खरेल र पुष्कर कार्की आईजीपीका लागि दाबेदार हुन् । खनाल, खरेल र ...
मानवअधिकार आयोगकी मोहना अन्सारीमाथि गम्भीर प्रश्नः सिके राउतसँग सम्बन्ध के हो ? (भिडियाे)
काठमाडौं । ग्रेटर नेपालका अभियन्ता फणिन्द्र नेपालले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पछिल्ल घटनाबारे चासो देखाउँदैआएका छन् । आयोग सदस्य मोहना अन्सारीलाई उनले भेटेरै हालै ज्ञापनपत्र पनि बुझाए । विवादित छविका व्यक्ति सिके राउतलाई ...
जनआन्दोलनका घाइतेले रुँदै भने, ‘सरकारले हाम्रो घाउमा मल्हम पनि लगाइदिएन’ (भिडियाे)
काठमाडौं । नेपालमा २०६२/०६३ मा भएको जनआन्दोले २ सय ३७ वर्ष पुरानो राजतन्त्र ढालेर देशमा लोकतन्त्रिक गणतन्त्र स्थापन गर्यो । विडम्वना, जसका लागि जीवनको आहुती दिएकाहरुको भने अवस्था उस्तै छ । कोही ...
अर्थविद् अधिकारीको टिप्पणीः अल्छि सरकारी कर्मचारीलाई पेन्सन दिन सकिन्न ! (भिडियाे)
काठमाडौं । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले श्वेतपत्र जारी गरेको एक साता बितिसक्यो । यसबारे अर्थविद्का विभिन्न टिप्पणी आए । अर्थमन्त्री खतिवडाले भने झैँ देशको अर्थतन्त्र धरापमै छ त ? भन्ने चासो र ...
अरुणकुमारको तर्कः ओलीलाई चीनले प्रयोग गरेरै भारत पठाएको हो (भिडियाे)
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तीन दिने राजकीय भ्रमणका लागि भारत गएका छन् । ५४ सदस्सीय टोलीको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री ओली शुक्रबार बिहान ९ बजे नेपाल वायु सेवा निगमको निजी विमानबाट ...
तिलाठीमा भारतीयद्वारा कुटिएका देवनारायणको सुझावः प्रधानमन्त्री ज्यू ! भारतीय दादागिरी रोकेर आउनु
काठमाडौं । सीमावर्ती क्षेत्रका नेपाली नागरिकाहरुले सुरक्षाको प्रत्याभुति कहिले नपाइको गुनासो व्याप्त छ । उनीहरुले हरेक दिन भारतीय सीमा सुरक्षा वलको ज्यादती खेपिरहेका छन् । सीमावर्ती क्षेत्रमा हालसम्म दर्जन नागरिकले भारतीयको व्यावाहारले ...
‘नेपाल–भारत सम्बन्ध २ सय वर्ष, मधेस–भारत सम्बन्ध १० हजार वर्ष पुरानो हो’ (भिडियो)
काठमाडौं । वाम सरकारलाई विश्वासको मत दिएको मधेसवादी दल राष्ट्रिय जनता पार्टी सरकारमा जाने या नजाने अन्योल अझै छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई सरकार बिस्तार गर्न सकस परिरहँदा संघीय समाजवादी फोरम र ...
डा. केसीको चिन्ताः प्रत्येक प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणमा नेपालको केही न केही गुमाएकै छन् (भिडियो)
काठमाडौं । हरेक नेता प्रधानमन्त्री बनेपछि भारत भ्रमणमा जाने नेपाली राजनीतिको संस्कार जस्तै बनेको छ । दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओली पनि आफ्नो पहिलो भ्रमण भारतमै गर्दैछन् । केही महिनाअघि ...
सरकारलाई ग्रेटर नेपालको दबाबः प्रधानमन्त्री ज्यू ! मोदीसँग नझुक्नु (भिडियो)
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारत भ्रमणको तयारी गरिरहँदा भारतले ज्यादती गर्दैआएको भन्दै सुझाव स्वरुप प्रधानमन्त्री मार्फत केही समूहले सन्देश पठाएका छन् । ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाले मंगलबार परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई ...
वामपन्थी सरकारसँग किन डराउँछन् व्यवसायी ?: डा. चन्द्रमणिको चिन्तन (भिडियो)
काठमाडौं । नेपाललाई शेयर मार्केटले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउनसक्छ ?: डा. चन्द्रमणिको नयाँ सरकारका लागि मुख्य चुनौती बनेको छ, आर्थिक उन्नती । आर्थिक उन्नतिका लागि धेरै चुनौती छन् । नवनियुक्त अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले समेत ...
निजी स्कुललाई विद्यार्थी नेताको चेतावनीः पशुपतिका साँढे झैँ छाडा छाडिन्न ! (भिडियो)
नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकताको संघारमै केही विषयलाई लिएर मतभेद देएिको छ । यस विषयप्रति एमालेको भ्रातृ संगठन अनेरास्ववियुको धारण कस्तो छ ? एमाले माओवादीको एकीकरणपछि अनेरास्ववियु र अनेरास्ववियु क्रान्तिकारीबीच ...
मदनकृष्णको ‘मनपर्ने मान्छे’: गुन्जिरह्यो, जलिरह्यो... (भिडियो)
काठमाडौं । बरिष्ठ कलाकार मदनकृष्ण श्रेष्ठले आफ्नी पत्निको लागि समर्पित गर्दै एउटा गीत गाएका थिए, ‘अरबौं मान्छेहरुमा तिमी एक मनपर्ने मान्छे !’ मंगलबार मदनकृष्णकी पत्नि यशोधाको पार्थिव शरिरमा लगाइएको अग्निको धुवाँले पशुपति ...
गायिका दिपाको स्वीकारोक्तिः केटाहरु मलाई नपाए मर्छु भन्थे, सबलाई साइड लगाएँ (भिडियो)
‘गायनमा लाग्नु भनेको भाँड बन्नु हो’ भन्ने सुदुरपश्चिमतिरको गलत मान्यतालाई लत्याउँदै दार्चुलाकी दिपा रोकाया देउडा गायिका बनिन् । धनगढी आएर गायिका रोकायाले ‘ब्यान तारो आईगयो’ बोलको गीत गाएपछि उनको नाम चिनिन थाल्यो ...
काठमाडाैं । नेपाली कांग्रेसका नेता खुम बहादुर खड्काकाे काठमाडौंस्थित पशुपति आर्यघाटमा अन्त्यष्टि गरिएकाे छ । हिन्दु संस्कारअनुसार आइतबार करिव ६ बजे उनकाे अन्त्यष्टि गरीएकाे हाे । प्रहरीले उनलाई विशिष्ट दर्जाकाे सलामी ...
गोविन्दराज जोशीको गुनासोः गिरिजाबाबु दरबारसँग मिलेर मलाई हटाए (भिडियाे)
काठमाडौं । कुनै बेला नेपाली कांग्रेसमा निकै प्रभावशाली नेता हुन् गोविन्दराज जोशी । अचेल पार्टी राजनीतिमा निस्क्रिय छन् । गिरिजाप्रसाद कोइराला पार्टी सभापति बन्दाताका जोशी उनका अति विश्वासिलो पात्र थिए । ...
सेतो मच्छिन्द्रनाथको रथयात्रामा छमछमी नाचे युवायुवती (भिडियो)
काठमाडौं । काठमाडौंमा मनाइने सेतो मच्छिन्द्रनाथको रथ जात्रा सकिएको छ । लगनमा राखिएको मच्छेन्द्रनाथलाई लगनटोलबाट मच्छेन्द्रबहालसम्म यात्रा गरेर जात्रा सम्पन्न भएको हो । प्रत्येक शुक्ल अष्टमीका दिन सेतो मच्छिन्द्रनाथको रथ तान्ने चलन ...
नेपाल सरकारलाई अमेरिका बस्ने नेपालीको गुनासोः हामी कसरी भइयो भूपू नेपाली ? (भिडियो)
काठमाडौं । लामो समय विद्यार्थी राजनीतिमा सक्रिय युवा नेता दीपक हुमागाईँ पछिल्लो केही वर्षयता परिवारका साथ अमेरिका बस्दैआएका छन् । नेपालआजकर्मी नेत्र पौडेलसँगकाे अन्तर्वार्तामा उनले नेपालको राजनीतिक प्रबृत्तिमाथि टिप्पणी गरे । माओवादी ...
काठमाडौं । साहित्यकार प्रकाश तिवारीले दोस्रो आख्यानात्मक कृति ‘निलोफर’ बजारमा ल्याएका छन् । यसअघि उनको ‘परित्याक्त’ नामक उपन्यास प्रकाशित छ । जन प्रशासन विषयमा स्नातकोत्तर तिवारी हाल नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्मा ...
काठमाडौं प्रहरी प्रमुखको गुनासोः बलात्कार घटनामा पीडितले सम्झौता गरिदिँदा कारवाही गर्न गाह्रो (भिडियो)
काठमाडौं । काठमाडौंको सुरक्षा व्यवस्था खस्कँदो छ । दिनदवाडै हत्या, बलत्कार, अपहरण, वेश्याबृत्ती र लागुऔषधले व्यापक रुप लिँदैगएको छ । यस्ता घटनाले राजधानीबासी आजित छन् । केही समयअघि मात्र काठमाडौं प्रहरी प्रमुखका ...
धार्मिक नेताको गुनासोः मैले त भनेको थिएँ, ईयूले नेपालमा जातीय हिंसा भित्र्याउँदैछ (भिडियो)
काठमाडौं । नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको कार्यालयले केही दिनअघि नेपालका खसआर्य समुदायलाई छुनेगरी एक विज्ञप्ति निकाल्यो । लगत्तै यसको विरोध पनि भयो । त्यसो त अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायले विभिन्न शिर्षकमा यहाँ ठूलो लगानी ...